Kutheni uMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta? -Ukubalwa ukuya eBukumkanini
Abo bangevanga kwaziswa okufanelekileyo kwizityhilelo kwi “Isipho Sokuphila Ngokuthanda KukaThixo,” nto leyo uYesu awayeyiphathise uLuisa ngamanye amaxesha iyakhathazwa yinzondelelo efunyanwa ngabo banenkcazo-ntetho: "Kutheni kugxininiswa kakhulu kumyalezo weli bhinqa langaphantsi lase-Italiya elisweleke kwiminyaka engama-70 eyadlulayo?"
Ungayifumana intshayelelo enjalo ezincwadini, Isithsaba seMbali, Isithsaba sobungcwele, Ilanga lentando yam (Ipapashwe yiVatican ngokwayo), Isikhokelo kwiNcwadi yezulu (ethwele i-imprimatur), imisebenzi kaFr. UJoseph Iannuzzi, kunye neminye imithombo. Oku kuvela KuLuisa kunye neZibhalo zakhe:
Kanye njengokuba isityhilelo esimangalisayo seNceba kaThixo iphethwe nguYesu kwi-St Faustina Umzamo kaThixo wokugqibela wosindiso (ngaphambi kokuBuya kwakhe kwesiBini ngobabalo), Kwangokunjalo nezambulo zakhe kwiNtando kaThixo zanikwa uMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta Umzamo kaThixo wokugqibela wokungcwaliswa. Usindiso kunye nokungcwaliswa: eyona minqweno mibini iphambili anayo uThixo ngabantwana Bakhe abathandekayo. Esokuqala sisiseko sokugqibela; ke, kufanelekile ukuba izityhilelo zikaFaustina zaziwe ngokubanzi kuqala; kodwa, ekugqibeleni, uThixo akanqweneli nje ukuba samkele inceba Yakhe, kodwa samkele obakhe ubomi njengobomi bethu kwaye ke size sifanane Naye-kangangoko esinakho isidalwa. Ngelixa utyhilelo kaFaustina, bona ngokwabo, bahlala bebhekisa kolu lungelelaniso lutsha lokuphila kwintando kaThixo (njengoko kutyhilwa kwezinye iimfihlakalo ezininzi ezivunyiweyo ngokupheleleyo ze-20).thNgenkulungwane yokuqala, ishiywe eLuisa ukuba ibe ngumabhalisi wokuqala kunye "nonobhala" wale "ubungcwele obutsha nobungcwele" (njengoko uPope St John Paul II bayibizayo).
Ngelixa izityhilelo zikaLuisa zisisiqhelo (i-Cawa ikuqinisekisile oku kwaye yaze yamkela ubukhulu becala), nangona kunjalo banika oko kukuthi, ngokungathandabuzekiyo, owona myalezo umangalisayo umntu unokucinga. Umyalezo wabo umangalisa ingqondo kangangokuba ukuthandabuza kusisilingo esingenakufezekiswa, kwaye siyonwabisa babeya Ubizelwe, kodwa ngenxa yokuba kungekho sizathu sivakalayo sihlala sibuthandabuza ubunyani bayo. Kwaye umyalezo ngulo: emva kweminyaka engama-4,000 yokulungiselela ngaphakathi kwembali yosindiso kunye nama-2,000 eminyaka yokulungiselela okuqhushumayo kwimbali yeCawa, iCawe ekugqibeleni ilungele ukufumana isithsaba sayo; ukulungele ukufumana oko uMoya oyiNgcwele ebemalathise kuye ngalo lonke ixesha. Ayikho enye ngaphandle kobungcwele be-Edene ngokwayo-ubungcwele obo uMariya, nabo, babunandipha ngendlela egqibeleleyo ngakumbi kunoAdam noEva—kwaye ngoku iyafumaneka ukulungiselela. Obu bungcwele babizwa ngokuba "Ukuphila ngokuthanda kukaThixo." Luhlobo lobabalo. Kukuqonda ngokupheleleyo komthandazo othi "Bawo wethu" emphefumlweni, ukuba intando kaThixo yenziwe kuwe njengoko yenziwa ngabangcwele abaseZulwini. Ayithathi indawo yoluphi na uhlobo lonqulo kunye nezenzo ebesizicelile izulu-lezulu-ukubuza iiSakramente, ukuthandaza iRosary, ukuzila ukutya, ukufunda iZibhalo, ukuzahlulela kuMariya, ukwenza imisebenzi yenceba, njalo-njalo, kuyenza ezi zinto. Imemelela ngokungxamisekileyo nangaphezulu, kuba ngoku singazenza zonke ezi zinto ngendlela eyahlulwe ngokwenene.
La ngamazwi athi uYesu asicele ukuba sihlale sihleli ezingqondweni zethu, entliziyweni, nakwimilebe yethu. (Bona NgoLuisa kunye neMibhalo yakhe isishwankathelo esifutshane malunga nemfihlakalo emangalisayo kaLuisa kunye nemeko yecawa yakhe yokubhaliweyo).
Imiyalezo evela kuMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta
IsiBhalo-Buza, Funa, kwaye unkqonkqoze
UThixo ukugcinele isipho esikhethekileyo esi sizukulwana...
UThixo akanguye lo Ucingayo
Ngokuvumela uThixo ukuba akuthande ...
Luisa -Uqhushululu Jikelele
Ndiza kulilungisa ilizwe ngekrele, ngomlilo nangamanzi ...
NgoLuisa kunye neMibhalo yakhe
Isibhengezo ngala maxesha.
ULuisa kunye nesilumkiso
Amadoda azakuzibona elahlekile.
Ukuza okuzayo kokuthanda kukaThixo
Isilumkiso siyakuba nentsikelelo.
Luisa-Iintlanga ziya kuhamba ngobuNya
Benza ngokuchasene nabo!
ULuisa -Bathobela oorhulumente, kodwa hayi mna
Abo bambalwa abaseleyo baya kwanela ukuguqula umhlaba.
Luisa Piccarreta-Makhe sijonge ngaphaya
Xa ndibona uBukumkani bam buphinda busakhiwa, ndiye ndayeka ukuba lusizi ndaya kuvuyo olukhulu ...
Ixesha lokubuyiselwa kweLizwe liphela
Ukuqaqambisa ukuBuya koBukumkani kuxhomekeke kuwe.
U-Luisa Piccarreta-Lowo uhleli kwiNtando yam uyaVusa
Ngaba unqwenela ukwazi ukuba uvuko lokwenyani lomphefumlo lwenzeka nini?
Ubungcwele obutsha kunye nobuNgcwele
UkuBuya koBukumkani bukaThixo emhlabeni, ukuzalisekisa uMthandazo kaBawo wethu uqobo, akukhona ukwenza umhlaba ube yindawo entle nethandekayo-nangona olo tshintsho, nalo, ngokuqinisekileyo luya kwenzeka. Ingakumbi malunga nobungcwele.
Luisa Piccarreta-Ukukhawulezisa ukuza koBukumkani
UYesu ucebisa uLuisa kunye nathi sonke: "Ke ngoko, nina-thandazani, kwaye ukukhala kwenu makuqhubeke:" Ngamana uBukumkani beFiat yakho bufike, kwaye intando yakho yenziwe emhlabeni njengasezulwini. "
Luisa Piccarreta - Akukho loyiko
U-Yesu wabonakalisa lo mbono ku-Luisa malunga nokukhuselwa kwiZohlwayo ezizayo: "[Inenekazi lethu] lajikeleza phakathi kwezidalwa, kwizizwe zonke, kwaye waphawula abantwana Bakhe abathandekayo kunye nabo bangazukuchukunyiswa zizibetho. Umama waseZulwini wachukumisa, izibetho zazingenamandla okuchukumisa ezo zidalwa. Wamnandi uYesu wanika uMama wakhe ilungelo lokuzisa kuye nakuphi na apho athanda khona.
U-Luisa Piccarreta-Ixesha leLuthando lukaThixo
Malunga nale Era kungekudala ukuba iqale kwihlabathi liphela, uYesu watyhila kuLuisa wathi: "Yonke into iyakuguqulwa ... intando yam iya kwenza ukuboniswa okukhulu, kakhulu, khonukuze kwakhiwe ubuhle obutsha bokuqaqambisa ubuhle obungenakubonwa ngaphambili, Izulu nomhlaba wonke.
U-Yesu uthi: Ntombi yam, yonke into oyibonileyo [izohlwayo] ziya kukhonza ekucoceni nasekulungiseleleni uluntu. Iziphithiphithi ...
← Kutheni ababoni bethu…
Kutheni uMartin Gavenda? →